Umenzi weFriji yoRhwebo | Nenwell-China
Ifriji yokubonisa inyama
Isikhenkcisi sokuBonisa isiQithi
Phantsi kweCounter Freezer
yenza ixabiso elikhulu ngaphezu kweemveliso
I-Nenwell inoluhlu olubanzi lwemveliso ephezulu yokusebenza kunye neyonga amandla efriji yentengiso ukuhlangabezana nazo naziphi na izicelo zakho ezizodwa.
Ngaphezulu kweminyaka engama-20 yamava kwifriji efakwe. I-Nenwell ibonelela bonke abathengi ngezisombululo ezisebenzayo nezichanekileyo kwisikhenkcisi kunye nebala lehotele. Sihlala sizalisekisa isithembiso sethu "Ukudala ixabiso elingaphezulu kunomnqweno womthengi".
Ukuba phambi kweMarike
Njengomvelisi wefriji worhwebo oqeqeshiweyo, uNenwell unombono obanzi kunye novakalelo kushishino, sinamandla okuvelisa izinto ezintsha kuphando kunye nophuhliso ukunika izisombululo ezibalaseleyo zesikhenkcisi kubathengi bethu.
Umbono wamazwe ngamazwe, Chukumisa iMphefumlo
Ukuthatha inxaxheba kwiindidi ezahlukeneyo zezixhobo zehotele zamazwe ngamazwe kunye nemiboniso yefriji minyaka le. Oku kusenza ukuba sibe ngabachwephesha ngakumbi kwaye sibe novakalelo kwiintsingiselo zemarike.
Ukuthengwa kwempahla kumazwe ngamazwe,
intengiso eshushu yehlabathi!
Amandla okuthenga amazwe ngamazwe avumela uNenwell ukuba acebise kwaye abonise iimveliso ezithengiswa ngokushushu kwihlabathi kubathengi bethu kwangethuba, ubanike uluhlu olukhulu lweenkcukacha zokuqala zefriji yokuthengisa. Ukunceda abathengi ukuba bathathe amathuba oshishino lokuqala.
intsebenziswano ubungqina obungenasiphelo amathuba !
i-axial fan motor
i-motor fan fan enomthunzi
ucingo tube condenser
isibane socango sokutshintsha
Ukuthengwa okuphezulu kwemarike kunye namandla okukhangela ----500 Ababoneleli abaSebenzisiweyo abaneemveliso zefriji kunye nezixhobo ezingaphezulu kwe-10,000. Kubandakanya izixhobo zasekhaya, iinxalenye kunye nemathiriyeli ekrwada.
Isisombululo esibanzi sefriji
ihotele kunye nevenkile enkulu!
Ngeminyaka yokusebenza yobuchwephesha kunye namava, inani elikhulu leenketho zokurhweba zefriji kunye nohlalutyo oluchanekileyo loshishino lunika uNenwell ukhetho olukhawulezayo lokucebisa eyona mveliso ifanelekileyo eluhlaza okonga amandla efriji. Ukuphucula imveliso elula, yonga abasebenzi kunye nendawo! Yila imifanekiso yomzobo kubathengi ukubonelela ngesona sisombululo.
Phuhlisa ikamva eliqaqambileyo nge
Izihlandlo ezili-10 zokuthengisa kwiminyaka emithathu
Kwiminyaka edlulileyo, uNenwell ebesoloko enikezela ngeengcebiso ezisebenzayo zophuhliso lwentengiso kubathengi abohlukeneyo, abathengi bahlakulele amava emveliso yefriji, benceda abathengi ngokukhawuleza ukuba bathathe isabelo semarike! Abanye babathengi bethu baphumelele ukukhula kwentengiso ngokukhawuleza kwixesha elifutshane ngentsebenziswano noNenwell!
Njengomvelisi wefriji ye-OEM kunye ne-ODM, siyazingca ngale nto kwaye sithatha oku ukubuyisela kuluntu lokukhathalela i-Nenwell. Impumelelo yeshishini lethu isekwe ngokuqinileyo kukuthembeka, ukuthembeka, ukuthembana kunye nentlonipho phakathi kwawo onke amalungu enkampani, abathengi bethu kunye namaqabane eshishini. Ngokuqaphela ukubaluleka kobudlelwane, sakha amakhonkco aqinileyo kunye nabathengi bethu kunye nababoneleli bethu, sigxile ekukhuleni okufanayo kunye nempumelelo.
I-ice cream ibonisa isikhenkcisi
Imephu yesiza| © Copyright - 2016 - 2021 ngu-NENWELL efrijini. Onke amalungelo agciniwe.